XOG:- Qorshe cusub oo loo dejiyay maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Qorshe cusub oo loo dejiyay maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe (AKHRISO)
Urur goboleedka IGAD ayaa lagu wadaa inuu soo saaro qorshe cusub oo lagu dhisi doonno maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo ku saleysan jadwal lagu dhisaayo maamulka labadaasi gobol.
Qorshaahaan oo sida la sheegay ay wadato urur goboleedka IGAD ayaa lagu doonayaa in si deg-deg ah loo dhaqan geliyo, qodobo ka kooban dhowr qodob oo suurta-gelin kara in maamul loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah:-
In maamul KMG ah loo dhiso gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe kahor 25-ka bisha September.
In la sameeyo guddi farsamo oo si wadajir ah u fududeeya howlaha iyo qabsoomidda shirka.
In si deg-deg ah loo soo xulo Odayaasha dhaqanka beelaha degga labada gobol.
In Odayaasha dhaqanka ay soo qoraan xildhibaanada maamulka labada gobol.
Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa dooranaya xildhibaanada labada gobol.
Shir ay dhawaantaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku yeesheen Odayaasha dhaqanka beelaha Abgaal iyo Xawaadle ayaa la sheegay inay isku raaceen dedejinta dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Shirkan oo ay ka dambeysay urur goboleedka IGAD ayaa uljeedkiisu ahaa in lagu xaliyo dhibaato ay labada dhinaca kala tabanayeen, waxayna IGAD haatan gacanta ku heysaa dhismaha guddi sare oo labada gobol yeeshaan, waxaana guddigaan lagu taliyay inuu ka koobnaado sida soo socota:-
Wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah ee labada gobol.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga sida uu dib ugu furmi doono shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, inkastoo ay socdaan dadaalo dheeraad ah oo lagu doonayo in si deg-deg ah maamul loogu sameeyo labadaasi gobol, ayaa hadane qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan waxay ka biyo diideen inay ka qeyb galaan shirka, waxaana weli la ogeyn sida ay ku suurto geli doonto qabsoomidda shirkaas.
Wixii kusoo kordha xogtaan dib kala soco Insha Allaah